Diyaarinta jiilaalka | December 2019
Qodobka loogu talagalay samaynta macaanka Manchurian
Haddii aad rabto inaad la yaabto qaraabadaada iyo martidaada leh macaanka oo leh dhadhan aan caadi aheyn oo leh waxyaabo badan oo faa'iido leh, ka dibna macaanka Manchurian ayaa ku habboon munaasabadaada. Ka fog qof kasta oo maqlaya sida raaxadaas, inkastoo ay ku jiraan maaddooyin farabadan oo daaweyn ah iyo fiitamiino, taas oo aan ka dhigin macmacaan delicious, laakiin sidoo kale nooc daawo ah.
Corn waa raaxo aad u fiican ee dadka waaweyn iyo carruurta, laakiin mudada isticmaalka cusub ee badeecadaan waa mid gaaban - nasiib daro, cobub dhalinyarada ah ma aysan awoodin inay ku kaydiyaan muddo dheer. Laakiin waxaad kordhin kartaa muddada isticmaalka hadhuudhka illaa xagaaga soo socda, haddii aad ogtahay sida loo dhigo hadhuudhka xilliga qaboobaha ee miro iyo koritaanka.
Cunto kariska qaboobaha
Hooyooyinka maalinlaha ah ayaa la yaabay su'aasha - waxa loo karinayo qadada ama cashada. Xilliga maqnaanta badan, shuruudaha qaarkood ayaa lagu daraa, sababtoo ah waa muhiim in cuntada la kariyo si dhakhso ah, laakiin waqti isku mid ah, waa mid dhadhan fiican leh, oo qancin leh. Raadinta dhabta ah waa diyaargaroowyo kala duwan, kuwaas oo aad si dhakhso ah u karisid waxyaabha wanaagsan ee qoyska oo idil.
Sida loo qalajiyo eggplants guriga
Blue - for many, tani waa mid ka mid ah khudaarta ugu jecel xilliyada xagaaga. Dadka reer koonfureedu uma maleynayaan in xagaaga oo aan ka helin suxuunta ukunta iyo suxuunta kale ee macaan. Xilliga kulaylka si dhakhso ah, iyo eggplants ayaa lagu kaydiyaa waqti dheer! Laakiin waxaad isku dayi kartaa inaad u diyaariso khudradan quruxda badan mustaqbalka oo ku raaxee suxuunta buluuga xilliga qaboobaha.
Siyaabaha loo nadiifiyo daasadaha guriga
Inta lagu jiro xilliga qaboobaha xilliga jiilaalka, su'aasha nadiifinta ee qasacadaha ayaa noqda mid khaas ah, tan iyo nadiifinta iyo nadiifinta suxuunta meesha kaydinta la keydsanayo waa fure u ah dhadhankiisa, dhadhanka iyo badbaadada caafimaadka aadanaha. Muxuu yahay macquul-reebidda qasacadaha? Si aad u qoto dheer, laakiin xaflado badan ayaa iska indho-tiraya hannaanka dardar-gelinta qasacadaha, waana mid aan waxtar lahayn.
Haddii aad jeceshahay xayawaan, laakiin mar walbaa laguma karin qasabad, markaa maqaalkani waa adiga! Halkaa waxaan kula wadaagi doonaa lix waxyaalood oo fudud, laakiin waqti isku mid ah cuntooyin aad u dhadhan leh oo dhajiyaya. Intaa waxaa dheer, waxaan ku baraynaa murugada ku saabsan diyaarinta cabitaankan. Sidoo kale ha ilaawin in laguu sheego faa'iidooyinka. Waa maxay faa'iidooyinka kaabajka leh ee faa'iido leh Meelo waxtar leh oo aan ku filneyn oo keliya miraha, laakiin sidoo kale compote, ka soo ururiyey iyaga.
Sidee loo sameeyaa tufaaxa khaliijka cateriga ah guriga
Qalabka cider-ka ah ee khudradda cagaaran ayaa ku jira liiska badeecadaha dabiiciga ah ee leh faa'iidooyin. Dadku waxay ogaadeen in ay ka soo hor jeedeen. Waxaana lagu faahfaahiyay faahfaahin dheeraad ah dhakhtarka naturopathic ee America D. Jarvis ee daabacaadda Honey iyo Waxyaabaha kale ee Dabiiciga ah, oo u muuqday daabacaad 1981. Shaqadiisa, wuxuu soo ururiyey dhammaan cuntooyinka waxtarka leh ee isticmaalka qalabka geedka tufaaxa ee tufaaxa ee daawada dhaqanka, isaga oo ku dooday in isticmaalka uu ka caawiyo ka hortagga iyo daaweynta cuduro badan.
Isku dhexyaal khudaarta
Apricot waa mid ka mid ah midhaha ugu caansan, caanaha ugu caansan iyo midab leh iyo wuxuu leeyahay sifooyinka gaar ah ee diyaarinta jiilaalka. Intaa waxaa dheer in macaanka, macaanka iyo macaanka, kaabayaasha ugu fiican waxaa laga diyaariyey, cuntada ugu weyn ee aan hadda ka fiirsan doonaa. Waa maxay faa'iido waxtar leh ee abrikot Khudaar ayaa ka kooban waxyaabo badan oo wax ku ool ah iyo fitamiino.
Qodobka loogu talagalay diyaargarowga xaymaha (xoqan iyo dhagax la'aan) iyo faa'iidooyinkeeda
Qaar badan ayaa rumaysan in qodax iyo dhoobo ay yihiin magacyo kala duwan oo la isku miro ah. Dhab ahaan, wax walba waa wax qalad ah. Gadaashu waa xayawaan duurjoog ah, oo qodxuna waa nooc ka mid ah xayawaanka guriga. Si kale haddii loo dhigo, dharku waa dabiiciga dabiiciga ah ee qodaxda duurjoogta ah iyo xayawaanka beeraha, taas oo ugu dambeyntii u soo noqotey inay ka weynaato oo ka macaan badan tahay qodxan, laakiin yar iyo ka sii xun ugxan.
Raashinka loo yaqaan "eggplant eggplant" ee xilliga qaboobaha
Dabiicadu waxay ina siinaysaa cuntooyin caafimaad leh oo caafimaad leh. Sidaa darteed, dhammaadka bilicda xagaaga ama "buluugga buluugga ah" u daaqa sariiraha, sida ay ugu yeeraan dadka caadiga ah. Inkasta oo khudradda cagaaran ay ka badan tahay midabka buluuga ah midabka midabka, noocyada qaar ayaa xitaa cadaan ah. Khudraddani waa mid aad u faa'iido leh oo nafaqo leh, markaa madaxbannaanidu waxay isku dayaan inay u diyaargaroobaan xilliga jiilaalka, ka dibna waxay awoodaan inay naftooda iyo qoyskooda ku farxaan badeecad jilicsan.
"Caviar dibedda, ukunta!" - Waad ku faraxsan tixraac this saxan cajiib leh kaheli by dabeecadda majaajilada Sowka L. Gaidai "Ivan Vasilyevich Isbedel Xirfad". Dabcan, sheyga noocaas ah lama barbar dhigi karo midab ama casaan madow ama qiimo faa'iido leh, laakiin weli waa cunto fudud, ma aha oo keliya xilliyeedka, sababtoo ah cagaar buluug ah ayaa loo diyaarin karaa qaab barkad jiilaal la'aan ah wax dhibaato ah.
Sida loo kariyo suugada malmal ee jiilaalka
Dayrta waa wakhti muhiim ah sanadkiiba marwalba, sababtoo ah waa waqtigii diyaarinta ilaalinta jiilaalka. Iyo wax yar marka la barbardhigo shaaha kulul ee macmacaan qaboobaha qaboobaha qaboobaha. Plum - waa doorasho weyn, sababtoo ah macmacaanku waa mid aad u fiican, karinta ma fududa. Ku saabsan faa'idooyinka tubta Plum (lat.
Sida loo kariyo plomme jiilaalka: 3 cuntada ugu fiican
Boorashka xayawaanka ah waa balaayiin xiiso leh, oo dhadhan fiican leh. Khudradda macaan ee miro leh oo dhanaan ah ayaa mar walba hela taageerayaashooda. Waqtigaan, waxaa jira cuntooyin badan oo loogu talagalay diyaarinta ilaalinta noocan oo kale ah. Ka fikir qaar ka mid ah. Soo ogow faa'iidooyinka dumarku ka dhigi karaan. Rugkee ayaa ka fiican inuu doorto Wixii saliid ah waxaa ugu fiican in la doorto noocyo kala duwan oo ah "Hungarian", "Renklod" ama nooc kasta oo kale oo leh jidhka cufan.
On khaanadaha dukaamada iibiyey hadhuudhka qasacadaysan ee gasacadaha. Waxaa badanaa la iibsadaa, maaddaama ay ka kooban tahay salad badan iyo suxuuno kale. Hase yeeshee sida noocaas oo kale ah ayaa lagaaga qaban karaa gurigaaga, waadna karsan kartaa ma aha oo kaliya miro, laakiin cobs dhan. Waa maxay sababta hadhuudhka kuleylka kuleylka laysku halleyn karo sifooyinka iyo cuntooyinka qasacadeysan ee ka imanaya waa mid waxtarka leh maaddooyinka qaarkood: waxaa ku jira qiyaaso yar (58 kcal halkii 100 garaam) waxana ay faa'iido u yeelan doontaa cuntada dadka doonaya in ay lumiyaan miisaankooda; waxaa ku jira fitamiinada kooxda B, ascorbic acid, fitamiin A iyo beta-carotene, niacin; waxaa ku jira macro - iyo maadooyin - sodium, potassium, fosfooraska, calcium, magnesium, selenium, manganese, copper, iron iyo zinc; walxaha ku jira kernels hadhuudh waxay leeyihiin waxyaabo aan antioksidan ah iyo waxyaabo ay ka soo baxaan; waxaa ku jira astaamaha amino, oo ay ku jiraan muhiim; ma keeno sinnaan la'aan, ka duwan sida la kariyey; ku dhowaad wax xasaasiyad ah; kuma jiraan gluten.
Ugu sareeya 10 cuntooyinka loogu talagalay tincture cherry guri
Tincture Cherry waa cabitaan ku salaysan berry ku jirta oo leh aalkolo dheeraad ah. Waxaa jira cuntooyin badan oo loogu talagalay tinctures cherry, laakiin maanta waxaan eegi doonaa 10ka sare, iyada oo calaamad u ah tirada maaddooyinka iyo hagaha karsiinka tallaabo tallaabo tallaabo ah. Waa maxay tincture waxtar leh on cherry Isticmaalka tincture on a cherry waxaa lagu go'aamiyey ka kooban.
Autoclave loogu talagalay wax soo saarka cuntada
Autoclaves ayaa muddo dheer loo adeegsan jiray aagag badan: daawo, qurxiyo, iyo warshado kala duwan, laakiin intooda badani waxay yaqaanaan aaladaha ilaalinta guriga. Marka la eego tayada alaabooyinka lagu kariyey iyaga, dadka caan ah sida lama filaan ah. Dad badan ayaa xiiseynaya inay iibsadaan ama abuuraan nidaam la mid ah isticmaalka guriga, sidaas awgeed maanta waxaan ka wada hadli doonnaa faa'iidooyinka iyo khasaarihii doorashooyinka la iibsaday iyo kuwa guriga lagu sameeyey.
Sida loo sameeyo adjika of yaanyada iyo basbaaska jiilaalka: qashin-tallaabo tallaabo ah ee karinta at guriga
Adika waa mid aad u caan ah. Waxay awood u leedahay in ay qurxiso wax kasta oo saxaraha hilibka ah, iyada oo lagu daray qoraallo gaar ah, sidaas darteed waxay la yaabi doontaa dhadhan cusub iyo dhadhan gaar ah. Waxaa ugu wanaagsan in la galiyo diyaarinta xawaashkan xilliga xagaaga, marka khudaarta ay ka buuxaan qorax iyo casiir. Wixii diyaarinta uma baahna dadaal badan, oo waxaan ku siin doonaa la karinayo for adzhika delicious ee maqaalkan.
Macaanka: Cunto karinta leh sawiro talaabo talaabo talaabo
Berry caleenta, geedo berde ah, berde ayaa la mid ah midhaha miraha la yaqaan. Badanaa, berde ayaa laga heli karaa roodhiyada foomka la qalajiyey. Maydhin cusub ayaa lagu kaydiyaa waqti aad u gaaban, sidaas darteed, marka lagu daro qalajinta, waxaa jira hab kale oo loo diyaariyo daaweyn loogu talagalay jiilaalka - si loo ilaaliyo. Macaanka macaanka waa mid aad u fiican, macaan, caafimaad leh, xusuusta marmalade ama marmalade joogta ah.
Sida loo kariyo boorashka digaaga guriga
Hooyo kasta waxaa dhici karta in ay kiisasku dhacdo, marka xaaladaha wakhtiga gaaban ee foosha xun, waxaad u baahan tahay inaad diyaariso qado sharaf leh. Waxaa markaa ka dib layskuna yimaadaa samatabbixinta, taas oo loo tixgelinayo inuu yahay diyaar garow caalami ah. Waxaa loo isticmaali karaa saxan gooni ah, saxan dhinaca ama waxyaalla ah maraqa, jelly, dubista.